Activity 2165216 · TheocBase/TheocBase · WebTranslateIt
Victor Zo changed 59 translations in Burmese, Myanmar [Burma] on TheocBase. See changes » Hide changes
changed by Victor Zo 19 April, 2019 08:21 .
ဟောပြောသူ %1 ယောက် ဒီအပတ် မရှိဘူး
changed by Victor Zo 19 April, 2019 08:28 .
ဟောပြောသူ အားလုံး ဒီအပတ် ရှိတယ်
changed by Victor Zo 19 April, 2019 08:32 .
changed by Victor Zo 19 April, 2019 08:35 .
changed by Victor Zo 19 April, 2019 08:42 .
changed by Victor Zo 19 April, 2019 08:43 .
%2 ကနေ %3 အထိ %1 အပတ်တွေ တင်သွင်းပြီးပြီ
changed by Victor Zo 19 April, 2019 08:44 .
လေ့ကျင့်ခန်းစာစောင်ထဲက နာမည်တွေနဲ့ ကိုက်အောင် ဟောပြောချက်နာမည်တွေကို ရွေးပေးပါ
changed by Victor Zo 19 April, 2019 08:53 .
တာဝန်စာရွက်အသစ် သင့်ဆီမှာ ရှိတယ်။ app ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ဖို့ ဖိုရမ်မှာ တောင်းဆိုမှု လုပ်ပါ။ Mention code %1
changed by Victor Zo 19 April, 2019 08:59 .
ဒေတာရင်းမြစ် တည်နေရာ ဖွင့်မယ်
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:00 .
ရွေးထားတဲ့ လိပ်စာကို ပြင်မယ်
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:08 .
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:09 .
အလုပ်မလုပ်တဲ့ လိပ်စာတွေအတွက် အထွက်ဖိုင်နာမည်
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:18 .
%2 ထဲက %1 လိပ်စာ(တွေ) တင်သွင်းပြီးပြီ။
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:19 .
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:20 .
အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ရပ်ကွက် မရွေးထားပါ။
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:23 .
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:24 .
အသုံးပြုလို့မရတဲ့ လိပ်စာတွေ သိမ်းမယ်
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:25 .
အသုံးပြုလို့မရတဲ့ လိပ်စာတွေအတွက် အထွက်ဖိုင်နာမည်
ဖိုင်ကို ဖတ်လို့ပဲ ရတယ်
ဟောပြောချက် အမျိုးအစား အယ်ဒီတာ
အွန်လိုင်းဒေတာ ဖျက်လိုက်ပြီ။ သင့်ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ ဒေတာကို အစားထိုးတော့မယ်။ ဆက်လုပ်မလား?
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:27 .
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:28 .
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:29 .
နောက်ဆုံး တပြေးညီ ချိန်ညှိခဲ့
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:40 .
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:41 .
ကော်မာ အကန့်အသတ် ရှိ။ စာမျက်တောင်ခတ်ဖို့ Enter နှိပ်ပါ
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:46 .
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:47 .
မြေပုံနဲ့ လိပ်စာ ရွက်များ
မြေပုံနဲ့ လိပ်စာ စာရွက်များ
ပုံနှိပ်ထုတ်ဖို့ ခလုတ်ကို ညာအောက်ထောင့်မှာ တွေ့ရ
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:48 .
changed by Victor Zo 19 April, 2019 09:53 .